पाईखाना सोध्दा शीर निहुराउने पल्टुवा टोल – WASHKhabar
पाईखाना सोध्दा शीर निहुराउने पल्टुवा टोल
Wednesday, January 8, 2020 287 पटक हेरिएको
रौतहट : उहाँ सारी सप्को पारेर घर बाहिर कतै निस्कने सुरसार गर्दै हुनुहुन्थ्यो । छोरी चप्पल मिलाउँदै थिईन् । त्यत्ति नै बेला हामी पनि पुग्यौं ।
हामीले परिचय गर्‍यौं, उहाँको नाम निर्मला मल्लिक रहेछ । गाउँमा नयाँ मान्छे आएको देखेपछि छिमेकीको आँखा पनि तीखा भए । पल्लो घरका विनोद बैठ टुप्लुक्क आईपुग्नुभयो ।
हामीले यताउता आँखा डुलायौं । शौचालय नदेखेपछि निर्मलालाई सोध्यौं । ‘तपाईको घरको शौचालय कहाँ छ ?’ उहाँ अक्क न बक्क हुनुभयो । शौचालय बनाउनै नसकेको भए छैन भन्न सकिन्थ्यो होला ? तर उहाँको हालत त्यो थिएन । उहाँले त अन्य संघसंस्थाले बनाएको शौचालय पनि भत्काएर प्यान सेट समेत गायब पारिसक्नुभएको थियो ।
‘शौचालय यही हो ?’ आँगनमै रहेको शौचालयको अवशेष देखाउँदै साथी डोल बहादुर ठाडा मगरले सोध्नुभयो । ‘पहिले बनाएको थियो । मेरो छोरा छैन, यहाँ छोरी जुवाई मात्र बस्छन् । म बाग्मती तिर बस्छु कहिलेकाहीं मात्र आउँछु । अहिले भत्काएको रहेछ’ निर्मलाले बहाना बनाउन भ्याईहाल्नुभयो ।
मल्लिकका छिमेकी विनोद बैठले भने दलित जातिको सबै घरमा शौचालय बनाईदिए पनि अहिले केही घरमा बाहेक शौचालय नरहेको बताउनुभयो । ‘तीन बर्ष अघि शौचालय बनाईदिएको थियो, कसले बनाईदिएको हो ? अहिले संस्थाको नाम चाहिं विर्सिसकें ।’ बैठले भन्नुभयो ।
रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका वडा नं. ४ मा पर्ने पल्टुवाटोलमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति मध्ये प्रायः दलित जातिको घरमा शौचालय नरहेको बैठकले बताउनुभयो । ‘कतिपय घरमा शौचालय छ, प्रयोगमा छैन, कतिले त भत्काईसकेका छन् ।’
बिनोदको घरमा शौचालय बनेको पनि तीन बर्ष मात्र हुँदैछ । उहाँका अनुसार टोलका सबै घरमा एकैसाथ शौचालय बनाउने अभियान चलेपनि शौचालयको महत्व नबुझेकाहरुले भत्काएका हुन् । शौचालय नभएका घरका परिवारले अहिले पनि खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्दै आएका छन् ।
शौचालय नभए पछि घर वरिपरिको वातावरण सफा हुने त कुरै भएन । खानेपानीको अवस्था पनि उस्तै थियो । नजिकै फोहोरपानी जमेको पोखरी, खिया लागेको ट्यूवबेल, फोहोरै फोहोर थुप्रिएको आँगन । पल्टुवा टोलमा पुग्दा जो कोहीले देख्ने दृश्य यिनै हुन् । त्यहाँबाट पाँच मिनेटको दुरीमा रहेको वडा कार्यालयले समेत चर्पीको पुनःनिर्माण गर्न गराउन कुनै पहल गरेको देखिदैन ।
एउटा बाटोले मात्र अलग बनाएको छ, निर्मलाको घर र पल्टुवा माध्यमिक विद्यालय । तर पल्टुवाबासीका लागि आँगनमै विद्यालय हुनु र नहुनुले खासै केही फरक पारेको देखिदैन ।